Wararka Maanta: Khamiis, Jan 11, 2018-Mareykanka oo wada hadal la yeelanaya Kuuriyada Waqooyi
Khamiis, Janaayo, 11, 2018 (HOL) – Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu wadahaddalo la billaabi doono Dowlada Kuuriyada Waqooyi marka la gaaro xilliga ay ku habboon tahay.
Wadahadal ku dhexmaray Khadka Telefoonka Arbacadii, isaga iyo dhighiisa Kuuriyada Koofureed Moon Jae-in, ayuu Trump ku sheegay inuu Mareykanka uu u furfuranyahay wadahadal uu la yeesho Kuuriyada Waqooyi.
Bayaan laga soo saaray Aqalka Cad ayaa lagu sheegay in labada hogaamiye ay isla garteen muhiimmada sii waditaanka cadaadiska ka dhanka ah Kuuriyada Waqooyi.
Arrintan ayaa imaneysa xilli Talaadadi hore ay diblamaasiyiin ka kala socda labada Kuuriyada yeesheen wadahadalladi ugu horeeyay muddo sannado ah.
1/11/2018 1:38 PM EST
Khamiis, Janaayo, 11, 2018 (HOL)–Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa uga mahad-celiyey shacabka iyo Dowlad Goboleedka Puntland sida wanaagsan ee ay u soo dhaweeyeen isaga iyo wafdigiisa.